Semalt: Ahoana ny fijanonana ny mozika mikaroka amin'ny Crawling Your WordPress Website
Maro ny olona maniry ny hitsahatra fikarohana tsy hikirakira ny tranonkala WordPress. Mety miteraka hafahafa aminao izany, fa ny olona sasany dia mino fa tsy tokony hikirakira ny tranokalany ny fikarohana raha tsy efa feno. Raha mpamorona tranonkala za-draharaha na orinasa za-draharaha ianao, dia mora aminao ny mampiato ny fitaovam-pitadiavana tsy hikirakira ny tranokalanao. Raha namorona tranonkala iray mampiasa WordPress ianao, dia tsy sarotra aminao ny hampiato ny Google tsy hikirakira ny pejy web anao. Mila manao fiovana kely fotsiny ianao. Ny olona sasany dia tia miasa eo amin'ny toerana miaina fa tsy mamorona tontolo iainana ao an-toerana. Ary ny olona sasany dia tia ny tetikasa manokana amin'ny fananganana ny portfolio-nao mba hahitan'ny mpanjifa maro kokoa. Noho izany, izy ireo dia tsy mila manindry ny tranokalany satria ny portfolio dia manan-danja kokoa ho azy ireo.
Max Bell, mpitantana ny Success Successor Semalt Digital Services, dia manoritsoritra ity toro-hevitra azo tsapain-tanana ity mba hijanonana ny milina fikarohana mba tsy hikirakira ny tranonkalanao sy ny antony hanaovana izany.
Mampiasa ny tontonana Admin
Ny dingana voalohany sy manan-danja indrindra dia ny fampiasana ny tontolon'ny admin ao amin'ny WordPress mba hanakiviana ireo fitaovana fitadiavana amin'ny fanodinana sy fisiahana ny tranonkala. Raha fantatrao amin'ny WordPress ianao, dia tokony ho fantatrao ny plugins izay azo ampiasaina amin'io lafiny io. Mandehana any amin'ny safidy Settings ary tsindrio midina. Eto dia ahitanao ny takelaka kisary izay mila tsindrio mba hampitsaharana ireo milina fikarohana amin'ny fampidirana ny tranokalanao WordPress. Raha vantany vao vita ianao, dia aza hadino ny mamonjy ireo fanovana rehetra ireo alohan'ny hanakatonana ny varavarankely..
Ampio ny marika meta ao amin'ny fizarana Header
Zava-dehibe ny manampy ireo meta meta ao amin'ny lohateny sy ny footer amin'ny tranonkalanao WordPress. Safidy roa izany: afaka mampiasa WordPress plugin ianao mba hahazoana an'ity asa ity na alefaso amin'ny loha-hevitra sy hampiditra meta tags. Ny fampidirana ireo meta meta ao amin'ny loha-loharana sy ny footer dia zava-dehibe, ary tsy hamela ny fikarohana mikaroka ny tranokalanao. Maro ireo olona no misafotofoto ny fomba hanitsiana ireo antontan-taratasy ireo, saingy dingana tsotra sy tsotra. Mila manitsy ireo rakitra Robots.txt ianao amin'ny fanakanana ireo mpitsikilo amin'ny tranonkala.
Hanova ireo rakitra robots.txt amin'ny fanakanana ireo mpitsikilo
Azo atao ny manova ireo rakitra robots.txt mba hisorohana ny fitaovam-pikarohana tsy hikirakira ny tranonkala. Ity rakitra ity dia ampiasaina handraketana ny fampidirana ny pejin'ny tranonkala sy ny lahatsoratrao. Azonao atao ny mahita ireo pejy tianao hampirina, ary ny iray dia tokony aseho amin'ny index. Noho izany dia afaka manitsy ny fanovana ianao ary tsy manadino ny mamonjy ireo fanovana ireo. Azo atao ihany koa ny manafoana ny boka rehetra amin'ny fotoana rehetra. Ity rakitra ity dia ahafahanao manatanteraka io asa io amim-pahombiazana ary manakana ny mpikirakira web tsy hikirakira ny tranonkalanao. Noho izany, mila mamorona rakitra an-tsoratra roa ianao ary mampiditra fehezanteny manokana ho azy ireo. Alefaso ireo rakitra rehetra ireo alohan'ny hamafana ny varavarankely.
Fiarovana amin'ny tenimiafina
Azonao atao ny mampiato ny fitaovam-pikarohanao amin'ny fampivoarana ny tranonkalanao amin'ny fampiasana ny torohay amin'ny fiarovana ny tenimiafina. Ho an'ity, tokony handeha any amin'ny tranonkalan'ny tranonkalanao ianao ary tsindrio ny safidy iray (Password Protection Directories). Io dia hanokatra pejy vaovao ho anao, izay ahitanao roa torolalana. Eto, tsy maintsy hitanao ny lahatahiry public-HTML izay apetraka ny anarana sy ny tenimiafina. Raha tsy misy ny fampahalalana ato amin'ity fizarana ity, tsy misy milina fikarohana mety hikapoka ny tranokalanao.
Miaraka amin'ireo fomba fanao etsy ambony ireo, saika ny webmaster sy ny mpitoraka blaogy rehetra dia afaka manakana ny fikarohana tsy hijery ny tranonkalany Source .